အိပ်မက်အိမ်: ဘယ်သူဆရာကြီးလဲ ?
အိပ်မက်အိမ်မှာ မက်ခွင့်မရတာအတော်ကြာသွားတယ်... ကိုဆိုးပေတို့ပြောသလိုပါပဲ... မျက်စီတွေလည် လမ်းမှားပြီး မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါ... လမ်းမှားသွားတာကလည်း ဇာတိမြေတောင်ပေါ်ဒေသကို ရောက်သွားလို့ပါ... ကျနော်တို့နေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသကိုရောက်တော့ မရှုရှိုက်လိုက်ရတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသရဲ့ အေးမြလတ်ဆတ်တဲ့ လေပြေအေးလေးတွေကို တ၀ကြီးရှုရှိုက်လိုက်ရတာ စိတ်ထဲမှာ လန်းဆန်းသွားတယ်ဗျာ... တရုတ်နယ်စပ်ဒေသဆိုတော့လည်း မြန်မာပြည်အတွက် တရုတ်ကုန်စည်တွေပို့နေကြတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ စည်ကားလိုက်တာအရမ်းပဲဗျာ... ဆူညံလိုက်တဲ့ စကားသံတွေကလည်း ညံညံကိုစီလို့.... ဘာတွေလဲဆိုတော့........
တရုတ်နယ်စပ်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ကုန်စည်တွေပို့ရာမှာ ၁၀၅ မိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ မန္တလေး... ရန်ကုန်... အစရှိတဲ့ဒေသအသီးသီးကို ပျံ့နှံ့စီးဆင်းကြပါတယ်... တရုတ်ကုန်ပစ္စည်း အများစုက DUTY ပိတ်ထားတော့ ဒေသစကားအခေါ်အရ ကယ်ရီ (Without Duty) လုပ်ကြတာများတယ်... ဂျူဒီသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း စရိတ်စကအရမ်းများတော့ ကုန်သည်တွေအတွက် လုံးဝမကိုက်ဘူး... ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဂျူတီဆောင်မယ်ဆိုရင် ၁၀ိ/- ပေးရရင် ကယ်ရီသမားပေးလိုက်တော့ ၃ိ/- လောက်ပဲကျတာကိုးဗျ.... ပစ္စည်း သယ်ခကလည်း ဂျူတီနဲ့ ကယ်ရီ ဆိုရင် ကယ်ရီက ကားသမားတွေအတွက် ပိုကိုက်တယ်လေ... ကားသမားတွေကလည်း ဂျူတီကို ကယ်ရီရောပြီး ဂျူကယ် ဆိုပြီးတင်ကြတယ်ဗျ... ဂျူတီတင်ပြန်ရင်လည်း ဂိတ်ကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကို များမပေးရဘူးမထင်လေနဲ့ ဆရာ.... ပေးရတာပဲ... Under Table Money ပေါ့ဗျာ... ဒါပေမယ့် အခုတော့ UTM မဟုတ်တော့ပါဘူး ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲ ပေးလို့ရနေတယ်... မပေးရင်လည်း ဂိတ်မှာ တောင်စစ်... မြောက်စစ်နဲ့ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းကို မသိဘူး.... ဘယ်သူ့ကို အဖေခေါ်ရမှန်းလည်း မသိဘူးလို့ ကားသမားတွေက ပြောနေကြတယ်ဗျ....
ကုန်စည်စီးဆင်းပုံက... ၁၀၅ မိုင်ဂိတ်ကိုကျော်ပြီးရင် သိန္နီက ရေပူဂိတ်ကိုထပ်ဖြတ်ရတယ်.... သိန္နီဆိုတာက လားရှိုးမြို့ ရောက်ခါနီးပါပြီ... အဓိကတော့ အဲ့ဒိ ၂ ဂိတ်ကိုကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ၈၀% က မန္တလေးကို ပစ္စည်း ရောက်ပြီသာမှတ်ပေတော့ပဲ.... အဲ့ဒီကနေဆက်ထွက်လာရင် တော့ မန္တလေးအ၀င် ၁၆ မိုင်ဂိတ်ကို နောက်ဆုံး ပေးကမ်းပြီးရင်တော့.... Everything is OK ပဲ.... ဂိတ်မှာထိုင်ကြတဲ့ အဖွဲ့စုံတွေကတော့ အများကြီးပဲ... Custom, နကသ (နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး), ရဲ, လ၀က, သစ်တော, မထသ, မူးယစ်, အေးချမ်းဖြိုး, ကညန, ဘာတွေမှန်းကိုမသိတော့ဘူး... အဲ့ဒီအဖွဲ့စုံတွေထဲက ဘယ်သူကဆရာလည်းဆိုတော့ဗျာ....
၁၀၅ မိုင်မှာဆိုရင် နကသ က ဆရာကြီး ဗျ.... ဘာကြီးလည်းတော့မသိဘူး... Custom ကစစ်ဆေးပြီးလို့ လွတ်မယ်ဆိုရင်တောင် သူကမလွတ်ဘူးဆို သွားရောပဲ.... ကြေးပေးလို့လည်း သူတို့အတွက် မကိုက်ဘူးထင်ရင် မလွတ်ပြန်ဘူးဗျ... Custom ဆိုတာ ငုတ်နေတာပဲ... သိန္နီကျတော့ မဆိုးလှဘူးဗျ... သူကတော့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းရှိတယ်... ချစ်စရာကောင်းတယ်... (အလကားတော့မလွတ်ဘူးဗျ).... ဟော.... ပါဝါတွေများပါတယ်ဆိုတဲ့ နကသ (ဆရာကြီး) မန္တလေးလည်းရောက်ရော.... ၅၀၀ိ/-၊ ၁၀၀၀ိ/- ပေးသလောက် နဲ့ပဲ ချောင်ကလေးမှာကျေနပ်နေရတယ်ဗျ... အဲ့ဒီမှာတော့ Custom ဆိုကတော့ ဆရာကြီးဗျ.... ပေး ၅၀၀၀၀ိ/-၊ ပေး ၁၀၀၀၀၀ိ/- သူအကုန်ယူတယ်ဗျ.... အဲ့ဒါကနေ့ခင်းပိုင်း... သူက ကန်ထရိုက်ဆွဲထားတာ... ညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ မောင်းတံဂိတ် (၀ါးလုံးတန်းထားလျက် အ၀င်အထွက်မောင်းတံ) စောင့် ကိုရွှေရဲ များက လာထား.... လာထားနဲ့ လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်လုပ်နေလေရဲ့ဗျာ.... ကားသမား... ကုန်သည်တွေက လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေ... ပေးရတာပဲပေါ့ဗျာ.... တရုတ်ပြည်ကနေ ၀ယ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ အရင်းက ၃ိ/- ပဲရှိရင် မန္တလေးရောက်တာနဲ့ ၁၅ိ/-လောက်ဖြစ်သွားတာတော့ မဆန်းလောက်တော့ပါဘူး.... အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ ဘယ်သူတွေမှာ ခံရလဲ .... ဘယ်သူ့မှာအပြစ်ရှိလဲ ... ကုန်သည်လား.... ကားသမားလား.... ဆရာကြီးတွေလား........ ? ? ? ? ?